Tamarta hirarka ama tamarta hirarka iyo dhirta quwadeeda | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daniel Palomino | | Tamarta biyaha badda, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, General, Deegaanka
Tamarta mawjadaha ama si cilmiyaysan oo badan oo loo yaqaan tamarta qulqulaya ayaa ah tan ka dhalata ka faa'iideysiga hirarka, taasi waa, farqiga u dhexeeya celceliska dhererka badaha marka loo eego sida ay u kala dhaw yihiin Dhulka iyo Dayaxa taasna waxay ka dhalataa soo jiidashada cufnaanta dambe iyo Qorraxda ee ku saabsan biyaha badan ee badda.
Ereygan waxaan oran karnaa kan dhaqdhaqaaqa biyaha, oo ay soo saartay soo jiidashada Dayaxa laba jeer maalintii, waa suurtagal in loo isticmaalo il tamar ahaan.
Dhaqdhaqaaqan waxay ka kooban tahay kor u kaca heerka badda, taas oo meelaha qaar noqon karta mid la tixgelin karo.
Dayaxu wuxuu luminayaa tamarta, si tartiib tartiib ah, wuxuuna abuuraa xoogag kacsan, taas oo iyaduna keenta in ay ku taalo farqi weyn oo ka weyn dhulka.
Celcelis ahaan faafinta tamarta oo ah qaabka xooggaga ayaa ku dhowaad 3,1012 watts, ama qiyaastii 100.000 jeer ka yar celceliska iftiinka qoraxda ee laga helo dhulka.
Xoogagga isdaba jooga ah kaliya saameyn kuma laha baddaha, iyagoo abuuraya hirarka badda, laakiin iyaguna sidoo kale saameyn ku yeesho noolaha, soo saarista ifafaale bayoolajiyeed adag oo qayb ka ah dabeecadaha dabiiciga ah.
Mawjadda uu Dayaxu ka soo saaray badda dhexdeeda ayaa ka yar hal mitir, laakiin meelahaas oo qaabeynta dhulku ay ku sii kordhineyso saameynta hirarka, isbeddel heerkiisu aad u weyn yahay ayaa dhici kara.
Tani waxay ku dhacdaa tiro yar oo ka mid ah aagagga gacmeed, oo ku yaal santuuqa qaaradda waana meelahaas uu ninku u adeegsan karo inuu ku helo tamar iyada oo loo marayo tamarta qulqulaya.
1 Isticmaalka tamarta qulqulka
2 Isticmaalka tamarta qulqulka
3 U qaybsanaanta mawjadaha adduunka
4 Tamarta daadka ee Spain
5 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka tamarta
Isticmaalka tamarta qulqulka
Ka soo horjeedka waxa qofku u maleyn karo tamarta qulqulatada, waxaa loo isticmaali jiray ilaa waqti hore, Masar hore waxaa loo isticmaali jiray Yurubna waxaa laga bilaabay in la isticmaalo qarnigii XNUMXaad.
Sannadkii 1580, 4 taayirro laydh oo rogaal celin ah ayaa lagu rakibay meelaha dedan ee Buundada London si ay biyaha u soo saaraan, oo soconayay hawlgalkii ilaa 1824, iyo ilaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Yurub waxaa ka hawlgalayay makiinado aad u tiro badan, kuwaas oo adeegsaday xoogga mawjadaha.
Mid ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ayaa joojiyay inuu ka shaqeeyo magaalada Devon, UK, sanadkii 1956.
Si kastaba ha noqotee, laga soo bilaabo 1945 waxaa jiray xiiso yar oo ku saabsan awoodda milatari ee yar-yar.
Isticmaalka tamarta qulqulaya mabda 'ahaan way fududahay waana mid aad u badan oo la mid ah tan korontada laga dhaliyo.
In kasta oo ay jiraan habab kala duwan, midka ugu fudud wuxuu ka kooban yahay biyo xireen, oo leh albaabbo iyo matoorro koronto ku shaqeeya, oo ku yaal xiritaanka marin biyoodka (afka, badda dhexdeeda, webi ballaadhan oo qoto dheer, oo isweydaarsiga biyahan cusbada leh iyo biyaha macaan, mawjadaha awgood. Afka qarka waxaa ku sameysma hal cudud oo ballaaran oo u eg masaan ballaadhsan), halkaasoo mawjadaha ay leeyihiin muhiimad gaar ah.
Si loo falanqeeyo shaqada nidaamka waxaa laga arki karaa labada sawir ee soo socda.
Hawlgalku waa mid aad u fudud oo ka kooban:
Markuu hirku kaco waxaa la yiraahdaa kacsan (gobolka ugu sarreeya ama dhererka ugu sarreeya ee ay gaareen hirarka), waqtigan irridaha ayaa la furay oo biyuhu waxay bilaabeen inay matoor noqdaan kaas oo gala marinka marinka.
Markuu hirku kaco iyo lacag ku filan ayaa la dhisay, albaabbadu way xirmaan si looga hortago in biyuhu dib ugu soo laabtaan bada.
Ugu dambeyntii, markii hirar hoose (gobolka ugu hooseeya ama dhererka ugu yar ee ay gaareen hirarka), biyaha waxaa lagu sii daayaa marawaxadaha.
Nidaamka oo dhan ee galaya biyaha godka iyo sidoo kale bixitaanka, marawaxadaha ayaa wada matoorro dhaliya tamarta korantada.
Marawaxadaha loo adeegsaday waa inay noqdaan sidaa awgeed si ay si sax ah ugu shaqeeyaan markay biyuhu galaan godka godka ama godka iyo sidoo kale markay baxayaan labadaba.
U qaybsanaanta mawjadaha adduunka
Sidii aan hore uga faallooday mawjadaha waxaa ku sii siyaadaya isku xirnaanta badda hoosteeda meelaha qaaska ah qaarkood, halkaasoo ay suurta gal ka tahay in loo isticmaalo mawjadaha sida il tamar, taas oo ugu dambayntii waxa na danaysa.
Meelaha ugu caansan ee tan lagu sameeyo waa:
Yurub gudaheeda, gacanka La Ranee ee Faransiiska, Kislaya Guba ee Ruushka, qolka Severn ee Boqortooyada Ingiriiska. Dhammaan goobahan waxay leeyihiin mowjado aad u sarreeya, oo maalin walba kor u kaca iyo dhicitaankiisu yahay 11 illaa 16 mitir.
Haddii aan aadno Koonfurta Ameerika waxaan aragnaa inay jiraan hirar ka badan 4 mitir oo ku teedsan xeebta Chile iyo gobolka koonfureed ee Argentina. Hirarku wuxuu gaarayaa 14 mitir Puerto Gallegos (Argentina). Waxa kale oo jira goobo ku habboon Belern iyo Sao Luiz, Brazil.
Waqooyiga Ameerika, Baja Kaliforniya, Mexico, mowjadaha ilaa 10 mitir, waxaa lagu xusay inay tahay gobol suurtagal u ah isticmaalka tamarta daadka. Intaa waxaa dheer, Kanada, Bay of Fundy, waxaa jira mowjado ka badan 11 mitir sidoo kale.
Aasiya dhexdeeda, mowjado sare ayaa laga diiwaan galiyay Badda Carbeed, Bay of Bengal, Koonfurta Shiinaha, xeebta Kuuriya iyo Badda Okhotsk.
Si kastaba ha noqotee Rangoon, Burma, mawjadaha waxay gaarayaan dherer dhan 5,8 mitir. Amoy (Szeming, China), 4,72 mitir hirar ayaa ka dhacaya. Dhererka mowjadaha magaalada Jinsen, Kuuriya, waxay dhaafeen 8,77 mitir halka Bombay, Hindiya, mawjadaha waxay gaarayaan 3,65 mitir.
Australia gudaheeda, hirarka hirarka waa 5,18 mitir Port Hedland iyo 5,12 mitir Port Darwin.
Ugu dambeyntiina, Afrika ma jiraan goobo wanaagsan, laga yaabee in laga yaabo in laga dhiso koonfurta Dakar, Madagascar iyo jasiiradaha Comoro.
Dunida oo dhan, waxaa jira ku dhowaad 100 goobood oo ku habboon dhismaha mashruuca baaxad weyn, in kasta oo ay jiraan kuwa kale oo badan oo mashaariic yaryar laga dhisi karo.
Xitaa waa loo isticmaali karaa in koronto laga dhaliyo qulqulaya oo ka hooseeya 3 mitir, in kasta oo faa iidadiisu ay aad uga yaraan lahayd.
Si kastaba ha ahaatee, rakibidda xarun koronto oo kacsan (inuu ahaado mid wax ku ool ah) waxaa suuragal ah oo keliya meelaha farqiga ugu yaraan 5 mitir u dhexeeyo hirarka sare iyo kuwa hoose.
Waxaa jira dhibco yar oo adduunka ah oo ay ifafaalehani ka dhacaan. Kuwani waa kuwa ugu waaweyn:
Guud ahaan, waxaa loo rakibi karaa soosaarka korantada, meelaha ugu waaweyn adduunka 13.000 MW, jaantus u dhigma 1% ee tamarta korantada adduunka.
Tamarta daadka ee Spain
Isbaanishka daraasadda tamarta waxaa lagu fuliyaa gaar ahaan Machadka Hydraulics ee Jaamacadda Cantabria, taas oo leh haanta tijaabada oo si cadaalad ah u weyn oo loogu talagalay cilmi baarista iyo tijaabinta waxa loo yaqaan Xeebta Cantabrian iyo Badweynta Badweynta (injineernimada badda).
Taangiga aan soo sheegnay wuxuu qiyaastii yahay 44 mitir oo balac ah iyo 30 mitir oo dherer ah, sidaas darteed wuxuu awoodaa inuu matalo mowjadaha ilaa 20 mitir iyo dabeylo gaaraya 150 km / saacaddii.
Dhanka kale, kama nihin gadaal, tan iyo sanadkii 2011-kii warshaddii ugu horreysay ee daadku ku yaal ee ku taal Motrico (Guipúzcoa).
Qaybta xakamaynta ayaa leh 16 marawaxado oo awood u leh inay soo saaraan 600.000 kWh sanadkii, taas macnaheedu waa, waxa 600 oo qof celcelis ahaan cunaan.
Intaa waxaa dheer, mahadsanid bartan boqolaal tan oo ah CO2 ma geli doono jawiga sannad kasta, waxaa lagu qiyaasaa inay leedahay isla saameynta isdaahirinta ee sababi karta a keymaha ilaa 80 hektar.
Mashruucani wuxuu lahaa maalgashi guud oo ku saabsan 6,7 milyan oo yuuro, kuwaas oo qiyaastii 2,3 loogu talagalay dhirta iyo inta soo hartay ee loogu talagalay shaqada dekedda.
Marawaxadaha, oo midkiiba soo saaro qiyaastii 18,5 KWh, waxay u qaybsan yihiin kooxo 4 ah waxayna ku yaalliin qolka mashiinka, xagga sare ee diyaaradda.
Intaas waxaa sii dheer, aaggooda ay ku hoydaan waxay ku yaalliin mid ka mid ah qeybaha dhexe ee qalooca ee digaagga oo celcelis ahaan biyo dhererkoodu yahay 7 mitir iyo dherer dhan 100 mitir.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka tamarta
Tamarta daadka ayaa leh wax badan faa'iidooyinka qaarna waa:
Waa il tamar aan la koobi karin iyo dib loo cusboonaysiin karo.
Tani loo qaybiyey aagag waaweyn ee meeraha.
Waa wax caadi ahiyadoo aan loo eegin waqtiga sanadka.
Si kastaba ha noqotee, tamarta noocan ahi waxay soo bandhigaysaa taxane ah cilladaha halista ah:
Inta badan cabirka iyo qiimaha taas oo ka dhalanaysa xarumaheeda.
Baahida loo qabo goobaha waxay leeyihiin qaab dhismeed taas oo u oggolaanaysa dhismaha biyo-xidheenka mid fudud oo aan qaali ahayn.
La wax soo saar goos goos ah, inkasta oo la saadaalin karo, tamarta.
Suurtagalnimada waxyeelo waxyeelo leh deegaanka sida soo degida, yareynta xeebaha estuarine, ee ay ku tiirsan yihiin shimbiro badan iyo noolaha badda, yareynta meelaha taranka ee noocyada badda iyo isu soo ururinta haraaga wasaqeysan ee kuyaala xaafadaha ay ku darsadaan wabiyada.
Xaddidaadda gelitaanka dekeddaha oo ku yaal dhinaca kore.
Cilladaha noocan ah ee tamarta ayaa ka dhigaya isticmaalkiisa mid muran badan dhaliya, sidaa darteed fulinteedu malaha mid ku habboon marka laga reebo xaalado gaar ah oo gaar ah, taas oo lagu ogaaday in saameynteeda ay aad u yar tahay marka la barbar dhigo faa'iidooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta biyaha badda » Teedka tamarta ama tamarta hirarka
clemente kacaan dijo
Sannado badan kahor waxaan ku guuleystey inaan ku qayliyo "Eureka!" (Archimedes) marka tijaabooyinka gurigayga aan ku gaadhayo habka fudud ee EOTRAC, kaas oo kaliya ka faa'iideysanaya xoogga ka sarreeya ee dabaysha, mugga weyn ee xooggan aan dhammaadka lahayn, kaasoo ku kooban oo keliya iska caabbinta qalabka. Kadibna waxaan ku guuleystey farsamada aadka u fudud ee 'GEM' oo u oggolaaneysa in si gooni gooni ah loo isticmaalo xoogga aan dhammaadka lahayn ee socodka ee ka shaqeeya garbaha sare (boqolleyda) boqollaal ama kumanaan mitir murabac ah isla markaana shaqo la mid ah ayaa buuxisa ebbadda hirarka, iyo wixii la mid ah - iyo in ka badan. cod dheer - Waxaan ku qayliyay "Eureka!, Eureka!", hadhuudhkan yar ee bacaadka ah si ay u soo saaraan tamar nadiif ah, nasiib daro kuwa awooda badan ee diirimaadka Caalamku way aamusaan ama waxay ii tixgeliyaan "lows". KA FIIRSO-been abuurka taleefanka gacanta
Anigu waxaan ahay hawlgab fudud oo dhashay 1938, CIDNA MA SIIYO BALLO, waxaan ubaahanahay dhamaan wadajirka si aan u arko, u fahmo ugana doodo sida xoogga dabeecadda lafteeda ay u soo saari karto tamar nadiif ah si loo yareeyo GHG ugana hor tagto kululaynta caalamiga ah (dabka guud) oo aad iyo aad u badan. suurtagalnimada nolosha aadanaha ee dhulka.
Jawaab si aad uhesho dib udajinta